Alfred Home Security Camera 4.1.12 (build 2026) Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.1.12 (build 2026) လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ေနအိမ္ & အိမ္ Alfred Home Security Camera
Alfred Home Security Camera ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
15 သန်း ကျော်ကမ္ဘာတဝှမ်းမိသားစုများကိုသူတို့နေအိမ်လုံခြုံရေးအတွက် အဲဖရက်ကင်မရာ ရွေးကောက်တော်မူပြီ။ ကျနော်တို့အိမ်မှာလုံခြုံရေးများအတွက်ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ထိပ်တန်း-rated app ကိုဖြစ်ကြသည်။
ပြည်သူ့အဲဖရက်ကင်မရာကိုချစ်! အဆိုပါ All-In-One app ကိုအခြေခံ, စျေးကြီးလုံခြုံရေးကင်မရာကထက်ပိုမို features တွေပေးစွမ်းသည်။ သငျသညျရှယ်ယာစတိုးဆိုင်မှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစီး, ချက်ချင်းကျူးကျော်တပ်လှန့်, ညဥ့်ရူပါရုံကို, walkie-Talkie နှင့်န့်အသတ် cloud storage ရ, သင်၏ဗီဒီယိုပြန်ဖွင်နိုင်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦး CCTV သင့်ရဲ့မွေးကင်းစပြီးနောက်ကြည့်ဖို့, သင့်ဥစ္စာအပေါ်တစ်ဦးကလေးမော်နီတာမျက်စိသိမ်းထားချင်, သို့မဟုတ်သင့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖျော်ဖြေရန်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် cam လြှငျ, အဲဖရက်ကင်မရာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါ!
ထူထောင်ရန် SUPER လွယ်ကူ
3 မိနစ်၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာ DIY ။ အဘယ်သူမျှမကုန်ကျမရှိခဲယဉ်းကျွမ်းကျင်မှု; ကိုယ့်တဦးတည်းဖန်တီးမှုစိတ်ကူး! အဲဖရက်ကင်မရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်-တန်း features တွေ, ကာလနှင့်အတူအလွယ်ကူဆုံး-to-install အိမ်မှာစောင့်ကြည့်သည့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့အိမ်ရှေ့တံခါးနှင့်အိမ်နောက်ဖေးခုခံကာကွယ်ဖို့, သင်ပင်လုံခြုံရေးအစောင့်မလိုအပ်ပါဘူး! အဲဖရက်အရေးအပါဆုံးဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျလုံခွုံရေးတင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေနေရာတိုင်းမှာရိုးရာ CCTV ကင်မရာများသို့မဟုတ် home စောင့်ကြည့်ကင်မရာမတူဘဲ, သငျသညျအဲဖရက်ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အခါတိုင်းပိုပြီးင်ကဘာလဲ, သင်ကင်မရာကို add သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးတိုက်ခန်းငှားထားလျှင်, သင်သည်သင်၏အိမ်ရှင်ကသို့မဟုတ်အခန်းဖော်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထည့်သွင်းမထားဘူးကြောင်းသေချာစေရန်ချင်ပေလိမ့်မည်။ သငျသညျသွားလာသည့်အခါ, သင်သည်သင်၏ဟိုတယ်အခန်းလုံခြုံသေချာစေချင်ပေလိမ့်မည်။ တစ်ခုခုကိုအမှု၌, သင်ကခရီးဆောင်ကဗီဒီယိုမော်နီတာလိုအပ်ပါတယ်။ ခိုးမှုများကဲ့သို့ဘာမှမ, နဲ့ Snooping, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပျက်အတွက်ကိုချိုးဖောက်မယ်ဆိုရင်ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဗီဒီယိုရိုက်ကူးအလွန်အမင်းအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။
ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစီးနှင့်အတူသင်အမြဲနေပါစေသင်တို့နေရာပေါ်တွင်င့်အတိအကျဘာကိုသိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကျူးကျော်တွေ့သည့်အခါထို့အပြင်အဲဖရက်ရဲ့ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာတခုကိုသင်ချက်ချင်းတပ်လှန့်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုချက်ချင်း walkie-Talkie မှတဆင့်စကားပြောအားဖြင့်ကျူးကျော်ကွာတွှေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Auto-မှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုတွေကိုအခမဲ့, န့်အသတ် cloud storage ထဲမှာသိုထားလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုသင် download လုပ်ပါနှင့်သံသယရှိသူဖော်ထုတ်ရန်ကူညီဖို့သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်သူတို့ကိုကိုသုံးနိုင်သည်။
အဲဖရက်ကင်မရာအောက်ပါနှင့်အတူတစ်အိမ်မှာလုံခြုံရေးကင်မရာများ၏ standard feature တွေအပေါငျးတို့သထားပါတယ်:
• 24/7 တိုက်ရိုက် Stream: ဘယ်နေရာမှာမဆိုအနေဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။
• Unlimited Cloud သိုလှောင်မှု: ပြသမှု, download, အများနှင့်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုမျှဝေပါ။
•ည Vision ၏: ကမှောင်မိုက်ရဲ့သည့်အခါလုံခြုံရေးအားကောင်းလာစေပါတယ်။
• Walkie-Talkie: သူခိုးတားဆီးရန်ဧည့်သည်များသို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့်ကလေးငယ်ဝေဒနာတွေ။
• 360 ကင်မရာ: နှစ်ဦးစလုံးမျက်ကပ်မှန်နှင့်အတူပိုကြီးတဲ့ဧရိယာဖုံးအုပ်ထားပါ။
•မှန်ဘီလူး, ဇယား, သတိပေးချက်, Trust မှစက်ဝိုင်း, ဥဩနှင့်ပိုပြီး ...
သင်အမှန်တကယ်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တစ်ဦးကအိမ်အကူ! Wi-Fi, 3G နှင့် LTE ကိုကနေတဆင့်ချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်သည်။
SMART, အဆင်ပြေ, ECO-သတိ
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တစ် CCTV ကင်မရာရွေးချယ်ရာတွင်? သို့တိုင်စျေးကြီးကလေးမော်နီတာ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် cam, သူလျှိုကင်မရာသို့မဟုတ် IP ကင်မရာအပေါ်ကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့မျှော်လင့်? သင်တစ်ဦးစမတ်ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့သင့်အိမ်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးအစွန်အဖျားင်: သင်တောင်မှအမှန်တကယ်တွင် CCTV ကင်မရာ, ကလေးမော်နီတာ, သူလျှိုကင်မရာ, ဝှက်ထားသောကင်မရာ, IP ကို ​​cam သို့မဟုတ် IP ကင်မရာမဝယ်ရန်မလိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများ၏ကုန်ကျစရိတ်အပြင်အဲဒီစမတ်အိမ်သုံးပစ္စည်းကိုမကြာခဏတစ်ဦးကိုလစဉ်ကြေးကောက်ခံ။ အဲဖရက်နဲ့တူလုံခြုံရေး App များနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမရှုပ်ထွေးတပ်ဆင်ခြင်း, အိုင်ပီအပြင်အဆင်များ, သို့မဟုတ်စာချုပ်ရှိသေး၏။ စင်ကြယ်သောနဲ့ရိုးရိုး: သင်သာ DIY Wi-Fi ကင်မရာသို့မဟုတ်ကလေးမော်နီတာအဖြစ်အဟောင်းပစ္စည်းတွေ repurpose မှအဲဖရက်ကို download လုပ်ပါရန်ရှိသည်။
သငျသညျအစဉျအမွဲရှာတှေ့နိုငျအကောင်းဆုံးအိမ်မှာစောင့်ကြည့်ကင်မရာ: အခမဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသော, စွယ်စုံများနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူ။ ဝှက်ထားရှေ့ပြေးကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်နက္ခတ္တဗေဒစောင့်ကြည့်ရေးဝန်ဆောင်ခမရှိပါ။ သင်တစ်ဦးစမတ်နေအိမ်တည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ် Google လက်ထောက်နှင့်အတူစမ်းသပ်စိတ်ဝင်စားလျှင်အဲဖရက်လည်းမဆိုအိမ်ပြန်တိုးတက်မှုသို့မဟုတ် home အလိုအလျောက်စီမံကိန်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းကဗီဒီယိုပလေယာ, GPS, ရေကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်ကြံ့ခိုင်ရေးထုတ်ကုန်သို့သူတို့ကိုငါလှည့်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏အသုံးမပြုတဲ့စမတ်ဖုန်း၏အားသာချက်ကိုယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးကလေး cam, ထိန်း cam, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် cam, webcam သို့မဟုတ် IP cam အဖြစ်ဥစ္စာကိုမသုံး?
ဒီ app ၏အချို့အင်္ဂါရပ်စက်ပစ္စည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
Alfred Home Security Camera အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Alfred Home Security Camera အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Alfred Home Security Camera အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Alfred Home Security Camera အား အခ်က္ျပပါ
stompin68 စတိုး 346 120.42k
Alfred Home Security Camera ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Alfred Home Security Camera အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.1.12 (build 2026)
ထုတ်လုပ်သူ KalaVision Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://alfred.camera/legal/terms-of-service
ဗားရွင္း: 4.1.12 (build 2026)
လက်မှတ် SHA1: AD:0A:96:74:98:C7:36:C6:3C:7E:1E:1B:01:CA:87:23:BD:4D:AB:26
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Alex Song
အဖွဲ့အစည်း (O): KalaVision Inc.
Alfred Home Security Camera APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ